Ranona solila, manadio taova taorian’ny fihinanana sakafo matsiro
Rehefa avy nihinana sakafo matsiro nandritra ny fetin’ny Noely teo dia tsara raha diovina ny taova rehetra ao anaty ao, mba tsy hiandrona any ny poizina sy ny menaka ratsy ary ny tavy. Mety hampirongatra ny karazana aretina toy ny aretin’aty, aretim-bavony mantsy ny sakafo izay lany nandritra ny fety.
Ity zava-pisotro vita amin’ny solila sy apongabendanitra ity dia tena mandaitra amin’izany. Mora karakaraina satria dia lomana anaty rano fotsiny izany. Tena tsara tsiro koa anefa izany ka mahamaivamaivana ny any anaty rehetra.
Apongabendanitra singany 2
Solila ½ fatorana
Rano tsotra 50 sl
Ø Tapahina 2 ny apongabendanitra ary esorina ny voany.
Ø Sasana madio tsara ny ravina solila.
Ø Rehefa madio ny voasarimakirana dia tetehina boribory manify.
Ø Araraka ao anaty bôkaly misarona ny rano ary lomana ao ny ravina solila, ny voan’ny apongabendanitra ary ny voasarimakirana voatetika.
Ø Rehefa izay dia ampidirina anaty vata fampangastiahana.
Ø Afangaro tsara mialoha ny hisotroana azy ary azo ampiana vaingana gilasy mba hampangatsiatsiaka kokoa azy.
Manadio ny taova
Manadio sy mahamaivamaivana ny taova aorian’ny fihinana sakafo mavesatra ity zava-pisotro ity. Na ny solila na ny apongabendanitra dia samy akora manadio ny taova avokoa. Ny tena mahatsara azy dia izy mety amin’ny salan-taona rehetra. Ankoatra izay dia mety ho an’ireo olona izay mampihena vatana ihany koa izy ity.